Ludo Club အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（60.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Ludo Club - Fun Dice Game
Ludo ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်အွန်လိုင်းတွင်ကစားနိုင်ပြီး ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ပါစေ - LUDO CLUB ကိုကစားပါ။
ဤသည် Ludo ၏မော်ကွန်းတိုက်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း အွန်လိုင်း multiplayer မူကွဲဖြစ်သည်။ ဒီပရီမီယံအန်စာတုံးဂိမ်းတွင်သီးသန့်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားများနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ခြင်း၊ လှေကားထစ်များတက်ခြင်း၊ အထူးအန်စာတုံးများစုဆောင်းခြင်းနှင့် King of Ludo ဖြစ်လာခြင်း!
သင်၏အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးရှာဖွေနေဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်မဟာဗျူဟာနှင့်ကံနှင့်အတူအပြာအပိုင်းပိုင်း။ Ludo ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာသည်။ အခြားကစားသမားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီးခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့၏ထိပ်ကိုရောက်ရှိပါ။ ဤသည်ပျော်စရာဂိမ်း၊ အမြန်ဂိမ်းတစ်ခုနှင့်နာရီပေါင်းများစွာပျော်စရာနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သင်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည့်အန်စာတုံးအခြေပြုဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ludo Club တွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ သင်နှင့် Facebook နှင့် Whatsapp ဖိတ်ကြားထားခြင်းအားဖြင့်ဤအန်စာတုံးဂိမ်းကိုသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ကစားနိုင်သည်။ Ludo CLub သည်အချက်အလက်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည်။ 2G, 3G, 4G! အက်ပလီကေးရှင်းသည်အော့ဖ်လိုင်းကစားခြင်းနှင့်ကွန်ပြူတာတို့အတွက်အထောက်အပံ့လည်းပါဝင်သည်။ သင်၏ဂိမ်းဘုတ်တွင်အခြားကစားသမားများနှင့်လည်းစကားပြောနိုင်သည်။ ဒီဂိမ်းက F2P နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ ကစားပွဲကိုဆက်လက်ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အပိုဆုကြေးနှင့် Lucky Dice အင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ဒင်္ဂါးများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ဖုန်းတွင်နာရီပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်စွာရပ်တည်နေပါသလား။ Ludo Club ကိုတပ်ဆင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများဖြစ်သော Teen Patti Gold နှင့် Baahubali မှလူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးကလေးဘုတ်ကစားခြင်းကိုကစားပါ။ Ludo Club ကိုသင့်ဖုန်း၏ HD display အတွက်ကျယ်လောင်။ တောက်ပသောအရောင်များနှင့်လှပသောဘုတ်ပြားနှင့်အန်စာတုံးဒီဇိုင်းများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
ဘာအသစ်လဲ Ludo Club - Fun Dice Game 2.1.71
Ludo Club - Fun Dice Game - game T-series
အလွန်မှ ဆော့လို့ကောင်းပါတယ် အပျင်းလည်ပြေတာပေါ့ဒါလေးဆော့ရတာ ကျေးဇူးပါရှင့်😊😊
Khin Thiri Wai